Shiinaha YF-H-211 Casaan Casaan Casaan ah oo Taariikhi ah 2 Qaanadleyda Qoryaha Habeenkii Miisaanka Sariirta Miiska Sunta Dahabka Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Yifan
YF-H-211 Midabbada Casriga ah ee Casaanka ah ee Casaanka ah 2 Khaanadaha Miisaska Miisaanka Sariiraha Miisaanka Saldhigga Dahabka
Waxyaabaha isku dhafan ayaa daqiiqad leh, Morrison Night Night maqaarkuna wuxuu si fiican isugu daraa maqaar dibedda ah oo leh lugaha birta ah iyo jiido. Laba khaanad ayaa u daaya meel badan oo loogu talagalay samaacadaha dhagaha, maaskaro maaskaro ah, buug-gacmeedyo iyo kuwo kaloo badan.
ASTAAMAHA Kaydinta, Khaanadaha
STYLE Multifunctional & Casri ah
Maaddi Muraayad sare oo loo yaqaan 'MDF gloss + + Velvet + Lugaha birta ahama
QIIMEYNTA SHARCIGA 400mmL x 400mmW x 500mmH
Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (la hadal adeegga macaamiisha)
Min.Order Tirada: 30Pieces
Qaabka Casriga ah: Ka soo muuqashada silhouette nadiif ah oo salka ku haya U-qaabeeya dahabi ah, waxay ku abuureysaa jawi wanaagsan oo casri ah gurigaaga Midabka casaanka ah waxaa lagu gaaraa gacmo suufka, sidaa darteed waxaa jiri doona kala duwanaansho midab / midab yar oo qayb kasta ah. Miiska sariirta dhinaceeda oo qaabaysan ayaa si buuxda loogu dhajiyay maqaarka faux ee dusha sare leh badhamada muraayadda ayaa lagu xoqay oo dhan si loo abuuro saameyn muuqaal ah oo dhalaalaya
Maqaarkan maqaarka lagu duubay ayaa leh laba khaanadood oo jiidaya, oo ku tiirsan lugaha laba jibbaaran ee labanlaaban. Waxaa laga heli karaa dhammeystir, cabbir, ama qaabeyn kasta. Qalabka xusuusta xayeysiinta waa in la bixiyaa oo u oggolaanaya gaar ahaansho gaar ah.
Kaydinta Wanaagsan: Kaalay 3 khaanad, waxay bixisaa hab wax ku ool ah oo casri ah oo lagu bixiyo kaydinta joornaalada, qurxinta, moobaylka, iwm.
Si Fudud U Isticmaal: Iyada oo leh saxaafad gaar ah oo lagu furayo naqshadeynta, istaandarkaan dambe wuxuu bixiyaa shaqo dadaal la'aan iyo soo jiidasho gaar ah sidoo kale.
Gacan-ku-sameynta MDF oo leh lugaha birta; MDF waa alwaax la farsameeyay oo bixiya awood aan caadi aheyn isla markaana hubisa dhowrista qaab dhismeedka lebbiska waqtiga.
Faa'iido Weyn: Dusha sare ayaa ku filan laambadda sariirta iyo saacadda alaarmiga. 2 khaanado ayaa boos badan siiya alaabtaada.
Dhismo Adag: Isku-dhafka kaamil ah ee jilif jilicsan, alwaax adag iyo bir bir ah, joogsiga caawa waa adag yahay oo waarayaa nolol dheer.
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan doonto naqshadeynta badeecadan. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay qaab madow oo madow oo aad adigu ka dooran karto. Aad ugu habboon shaqaalaha xafiiska guud, midabku wuu ka fiican yahay in la daryeelo!
Hore: YF-H-210 Raaxo Casri ah oo Casri ah & Dahab 3 Qaanadleyda Qolka Jiifka ee Joogitaanka Jadwalka Miisaanka Sariirta
Xiga: YF-H-212 h Miisaska Sariiraha ee Gogosha La Dhigay oo leh Saldhig Biraha Dahabka Dahabka ah
Shaxda Laptop-ka sariirta
Shaxda shelf ee sariirta
Jadwalka Miiska Jiifka Furniture
Shaxda Sariirta Birta
Shaxda Sariirta Raaxada
Shaxda Sariirta Casriga ah
Jadwalka Miisaanka Mileteri
Shaxda Sariirta Dhinaceeda Habeenkii
JF-H-201 Miis-joogsiga Guriga Miiska Dhinac cad
YF-H-209 Casriga 3 Khaanadda Caddaan Madoow ee Lacagta N ...
YF-H-204 Dhamaadka Dahabka Caddaan ah ee istaaga casriga Casrigan ...
YF-H-203-1 maqaar Laba khaanado waasac oo waardiyeyaal ah
YF-H-208 2 Miis Joogtada Habeenki Miis Casri ah
Miiska Side YF-H-206 la Self xiridda khaanadda La ...